यी सुन्दर युवतीहरुको यस्तो अचम्मको माछा मार्ने तरिका (हेर्नु`होस् भिडियो सहित) – Dailny NpNews
यी सुन्दर युवतीहरुको यस्तो अचम्मको माछा मार्ने तरिका (हेर्नु`होस् भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०४, २०७८ समय: २१:५८:४८
कोमाछा पालन एउटा कृषि व्यव’साय हो । तराईका विभिन्न भूभागमा यो पेसा ब’ढ्दो क्रममा छ । माछा पोषण’को रूपमा प्रयोग गरिने प्रोटिनको एक प्रमुख स्रोत हो ।
माछा सुपाच्य हुनुका साथै यसमा १५–२० प्रतिशत प्रोटिन पाइन्छ । यसको अलावा माछालाई सगुनको रूपमा लिइन्छ ।माछालाई पोखरी, ताल, नदी, धान खेत तथा अन्य जलाशयहरूमा पालन् गरिन्छ । व्यावसा’यिक रूपमा पालिने माछाहरू हाल ७ प्रकारका रहेका छन्, जसमध्ये ३ स्वदेशी र ४ विदेशी जातका छन। यी सुन्दरीको माछा मार्ने रमाइ”लो तरिका यहा हेर्नुहोस भिडियो….
यो पनि पढ्नुहोस …..जवानीमै कपाल फुल्यो ? मेहेन्दी हैन, यी चीजको प्रयोगबाट बनाउनुहोस् केही दिनमै कालो
आजभोलिको व्यस्त जीवनशैलीका कारण हामीले आफूलाई धेरै समय दिन पाउँदैनौँ । जस कारण हाम्रो शरीरमा निकै समस्या देखिने गर्छन्। यस बाहेक बढ्दै गएको प्रदूषण पनि हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानी कारक हुने गर्छ। बढिरहेको प्रदूषणको असर सबैभन्दा बढी हाम्रो कपाल र छालामा पर्ने गर्छ। जवानीमै कपाल फुल्ने समस्या आजभोलि हर व्यक्तिका लागि देखिन्छ।आज हामी तपाईलाई केही उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ, जसले गर्दा तपाईको सेतो कपाल छिट्टै कालो हुने गर्छ।
१) सेतो कपाल कालो बनाउनका लागि अमला र रिठाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। एउटा फलामको कडाइमा अमला र रिठाको पाउडरलाई रातभर भिजाइदिनुहोस्। त्यसपछि बिहान कपालमा राम्रोसँग लगाउनुहोस् सुकेपछि सफा पानीले त्यसलाई धुनुहोस् । हप्तामा २–३ पटक यो उपाय अपनाउँदा तपाईको कपाल चाडै कालो बन्न थाल्छ।२) एलोभेरा लगाउँदा पनि कपाल चमकदार हुने गर्छ। तेल लगाउनुअघि कपालको जरामा एलोभेरा जेल लगाउनुहोस् । यसो गर्दा तपाईको कपाल कालो हुने गर्छ।
३) प्याजको रस पनि निकै उपयोगी मानिन्छ। प्याजको रसलाई कपालको जरामा लगाउनुहोस्। सुकेपछि कपाललाई स्याम्पु लगाएर धुनुहोस्। यो उपाय हप्तामा २,३ पटक गर्दा पनि तपाईको सेतो कपाल कालो हुन थाल्छ।४) सेतो कपाललाई कालो बनाउनका लागि मेथी पनि निकै उपयोगी मानिन्छ। रातभर मेथीलाई पानीमा भिजाउनुहोस् र बिहान त्यसलाई पिनेर कपालमा लगाउनुहोस्। यो सुकेपछि स्याम्पु लगाएर पखाल्नुहोस्। यसो गर्दा तपाईको कपाल केही दिनमै कालो र चम्किलो हुनथाल्छ।